pamusoro 6 Zvitima Zvekurara MuEurope Zvekufamba | Save A Train
musha > Travel Europe > pamusoro 6 Zvitima Zvekurara MuEurope Zvekufamba
Chitima Kufamba, Rovedza Kufamba Austria, Rovedza Kufamba Belgium, Rovedza Kufamba France, Rovedza Kufamba Germany, Rovedza Kufamba Italia, Rovedza Kufamba Sweden, Chitima Kufamba Switzerland, Chitima Kufamba UK, Travel Europe
Wakamboshamisika here kuti chii sokuti kune tarisisa, achishamisika, kubva guru mufananidzo mahwindo sezvo nyika whirls kubudikidza? Sei nezvekuzvarwa lulled nokurara maererano rakadzikama Kuzunungusa chitima sezvo trundles pasi njanji? chitima kufamba nzira yakajairika yekufambisa muEurope yose, uye zvichida imwe yenzira kuita ndizvo Via avete chitima. nezvitima izvi, izvo zvinowanzo simuka mumasikati uye kwekufamba pakati pehusiku, ipa chiitiko chakasiyana kwazvo kubva pachiyero chitima cherwendo ruzivo. Takaona vakaunganidza yakanaka akarara nezvitima mu Europe kwamuri. Kubva kuItaly France, heano edu matanhatu epamusoro eEuropean usiku zvitima.
Train Transport Ko The Eco-Friendly Way To Travel. Nyaya iyi yakanyorwa kudzidzisa pamusoro Train Travel ne Save A Train, The CHEAPEST Train Tickets Website In The World.
Top muvati Train 1: Milan To Palermo
Kana iwe wakambofunga nezvekusangana nemaruwa eItaly, ichi akarara chitima ndeimwe yenzira kuita kudaro. kunyange zvazvo chitima rwendo inotora maawa makumi maviri kubva pakutanga kusvika pakupera, chitima rakananga uye pane zvakasiyana-siyana zvipi kuti akarara cabins. Tickets iripo Via Thello, inoshanda matikiti kuVenice zvakare.
Kana uri kutarisa kuponesa mari, unogona kusarudza mana-munhu couchette, iyo inoshanda sekanguva Mini akarara nezvechisarudzo. zvisinei, kana uri kutarisa kuti vamwe zvakakomba rakavharwa-ziso, unogona kusarudza kupatsanura matatu-munhu kabhini neshamwari – kana kunyange vatorwa, uye tikiti achaita mari pasi 50 Euro. Ndiwo kutsutsa kutengeserana! Kana uri kutsvaka zvakawanda Large mamiriro ezvinhu, unogona kuchengetera imwe chete akarara pasi masere euros. Nepo musingadi kuwana chero in Suite zvivako, iwe unozogona kunakidzwa nekurara murunyararo pamutengo wakachipa.
rwendo urwu anoona yakakura swath kweItaly, sezvo zvinoda iwe kubva kuMilan yose nzira muromo munyika vene. Munziramo, iwe uchawana anotsvaira vistas emahombekombe uye zvikomo zveTuscany. Ichi chi, ehe saizvozvo, kuwedzera kune yakavezwa mifananidzo yeRome nenhoroondo yayo.
Top muvati Train 2: Zurich Ku Hamburg
Sarudza redu rechipiri yakanakisisa akarara chitima mu Europe munhu achimhanya kubva Zurich, Switzerland kuna Hamburg, Jerimani. If you’re looking for a sleeper train service, iwe unenge uchida kufunga Nightjet. Kunyange zvazvo pane nzira dzakawanda ndirovedze nzira dziripo chitima ichi, ungada kufunga kuenda Via imwe nzira kuti anokupa anoshandura. Mumaruwa akanaka, uye chitima chinofamba nepakati misha midiki yakawanda munzira, kusanganisira guta Hanover. maguta ava zviripo rurege parwendo rwako kana uine nguva. Usakanganwe zvinoshamisa maonero yeAlps iwe unozogona kuona kana.
Even nani, kamwe kwawakaita nzira yako kuna Hamburg uri chinhambwe kubva Berlin. Guta razvino reGerman rinozivikanwa nekuda kwaro husiku husiku uye vazvipire kwazvo kune tsika yeva hipster. Nakidzwa nehunyanzvi hwemugwagwa uye huru kofi paunofungisisa zvakasarudzika zvasara zveBerlin Wall.
Zurich KuBern matiketi
Geneva KuBern matiketi
Yakabvumirana kuBern matikiti
Zurich kuenda kuHamburg matikiti
Top muvati Train 3: Brussels To Vienna
The kweBrussels kuna Vienna European akarara chitima chinhu chakakurumbira nzira unobva Belgium kuAustria. Zvinoenderana nechitima chaunosarudza, inomhanya pane ingangoita kubva masikati uye inosvika mambakwedza, uye maawa gumi nemana’ nguva kufamba. Izvi zvikuru nyore dumbu pane, vanoti, iyo makumi maviri maawa anodikanwa nehusiku wechitima kubva kuMilan kuenda kuPalermo nzira.
Yakadaro pfupi nguva yakawanda yokuti njanji kufamba, hamungambovi vanofanira kuzopedza overlong panguva yokudyira motokari, kunyangwe iwe unogona zvirokwazvo kunakidzwa nezvinhu zvinopihwa nemakirasi akasiyana.
Paunenge uri muVienna unogona sangana neiyo chaiyo kofi tsika, sezvo Vienna yakazvisimbisa pachayo senzvimbo yekofi yeEuropean.
Brussels kune Bruges matikiti
Antwerp kuenda kuBruges matikiti
Brussels kuenda kuVienna matikiti
Ghent kuenda kuBruges matikiti
Top muvati Train 4: London Ku Edinburgh
Izvi hwokutiparadza yakakurumbira anomhanya katanhatu pavhiki. Also akadana Caledonian akarara, ino yekurara sevhisi inosanganisa umbozha nemutengo-unoshanda. Unogona kuwana zveefa kuti zvinosanganisira zvokudya, zvinwiwa, uye chokwadi, makamuri ekurara.
Kana uri kutarisa kushanyira London parwendo rwenyu, unogona nguva dzose vasarudze kutora Eurostar kubva yakaoma Europe. Uyu Mari-inobudirira uye nyore nzira kuti rwendo pamhiri gwara kubva kuFrance England. Tickets iripo kubva dzimwe nzvimbo, vakadai seAmsterdam.
Kana uri kutsvaka chikonzero kuti anotora nzira iyi, rangarira kuti Edinburgh ndiye imba yaHarry Potter, ari famed pakusikwa JK Rowling. Iwe unogona zvakare kutsvaga imwe nzira yekuenda kunzvimbo dzakakwirira, akadai Fort William, nokuti zvechokwadi wokuScotland ruzivo. Inoshanda kwatiri!
Amsterdam kuenda kuLondon matiketi
Paris kuenda kuLondon matiketi
Berlin kuenda kuLondon tikiti
Brussels kuenda kuLondon matiketi
unokudzwa nezvemamiriyoni 5: Paris KuMunich
Kunyange rwendo rwuno tekinoroji harukodzeri senge yekurara nzira yechitima, nokuti haibatanidzi wenguva akarara berth, inomhanya yakati wandei zuva nezuva.
Ehe saizvozvo, Paris ndiro guta vezviedza uye rimwe zvikuru maguta uchidanana munyika, saka hazvifaniri zvachose zvibodzwa ruvara uri European pazororo. Izvi ndezvechokwadi kana kuti kushanya kwenyu wokutanga kana wako ramazana.
Zvichakadaro, Munich musha Oktoberfest. Mutambo uyu zvinoitika kuva mumwe wangu vaaida nguva dzose – ndiwo yakazara chiitiko vezviuru. With zviuru vaivapo pagore uye plethora nemabasa zvokusarudza pazviri, Munich yakakodzera nzvimbo pane yako chinyorwa.
Dusseldorf kuenda kuMunich matikiti
Dresden kuenda kuMunich matikiti
Paris kuenda kuMunich matikiti
Bonn kuMunich matikiti
unokudzwa nezvemamiriyoni 6: Copenhagen To Berlin
Ichi chimwe panotaurwa unokudzwa nokuda munhu nonstandard akarara chitima ruzivo, asi yakakoshesa nguva nekuti uchazviwana uchipfuura nemamwe materu akanakisa muEurope. Denmark ndiyo rakasiyana kunovhengana wokuScandinavia simba uye yakaoma European tsika uye hachisi uchashayikwa. Iyo nzira yacho inotangawo padyo padyo Malmo, rinova rakanaka guta rekushanyira uye rechitatu pakukura muSweden.
Nepo musingadi kuwana kuzara akarara berths pamusoro nechitima ichi, iwe uchawana nguva yehusiku nzira inowanikwa zuva nezuva. Izvi kuchaita kuti musiye usiku uye svika mangwanani ndivandudzwe zuva inouya. Nokuti zvakanaka chiitiko asiri akarara chitima, iwe uchazoda kuchengetera yekutanga-kirasi tikiti. matikiti izvi kazhinji kuuya vakawedzera perks akadai mamwe mukwende, zvaisanganisira chikafu, uye yakawanda yakavanzika cabin ruzivo.
Frankfurt kuenda Berlin matiketi
Copenhagen kuenda Berlin matiketi
Hanover kuenda Berlin matiketi
Hambourg kuenda Berlin matiketi
Kana uchifamba uchifamba Europe nechitima wakasvibiswa chose sarudzo. Kana zviri muScotland kana Spain, Noweyi, kana Sweden, akarara nezvitima zvimwe zvakanaka mabasa kumativi kusvika mangwana vakazorodza uye vakagadzirira zuva kwako kuuya. Paunenge uine plethora zvaungasarudza yauinayo, sechitima chechitima kana kurara kwehusiku kweitima refu, Porendi, Lisbon, kana kunyange Moscow, kuita pachako nyasha uye rova ​​izvi matanhatu pamusoro akarara nezvitima mu Europe pachinzvimbo. hauzovipo urombo!
Famba husiku uye bhuku rako Kurara Zvitima na Save A Train!
Unoda embed yedu Blog romukova “pamusoro 6 Zvitima Zvekurara MuEurope Zvekufamba” pana yako nzvimbo? kana Unogona kutora mapikicha edu uye rugwaro uye kutipa chikwereti ane kubatana uku Blog romukova. Kana tinya pano: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fsleeper-trains-europe%2F%3Flang%3Dsn ‎- (Mupumburu pasi zvishoma kuona Embed Code)
Munyaya inotevera batanidzo, muchawana yedu rinofarirwa kupfuura chitima pakutengeserana – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml, <- Link iyi nokuti Chirungu pakutengeserana kumhara mapeji, asi isuwo tine https://www.saveatrain.com/es_routes_sitemap.xml, uye iwe unogona kutsiva es kuti fr kana de uye nemitauro yakawanda yesarudzo yako.
#husiku husiku EuropeTraveling NightTrains SleeperTrains Train Travel
How Kuenda To Norway Is A Different Travel Experience
Chitima Kufamba Norway, Travel Europe
Milan Ku Roma NeTrenitalia Zvitima Mukati 3 Hours
Rovedza Kufamba Italia, Travel Europe